UKUQALA KWEMFUNDO: UMartin Vrijland
UBo Goertzel umqambi we-robot uSophia: "Unokhetho lwe-2 okanye iplagi kwi-AI okanye uhlala kwindawo yabantu"
Kufakwe kuyo UKUFUNEKA KWEMFUNDO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-25 Disemba 2017	• 18 Comments
UBen Goertzel yi-wizkid ekhethekileyo kwintsimi ye-AI. Waphumelela kwi-19e yakhe nge-degree ye-bachelor degree kwi-Quantitative Studies. Ngoko waqala ngolwazi oluninzi lweemathematika esemncinci kwaye emva koko wafumana i-PhD kwimathematika. Emva koko watshintsha kwisayensi yesazi kwaye ekugqibeleni wahamba [...]
Indlela amajelo angenza ngayo iindaba zobuxoki ngoncedo lwe-AI (ingqiqo yolwazi)
Kufakwe kuyo UKUFUNEKA KWEMFUNDO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-8 Disemba 2017	• 18 Comments
Okokuqala, kufuneka sikhulume ngokwenza iindaba zobuxoki ngoncedo lwabadlali. Ukwenza oku ngokunika abantu abaye bawafumana kwaye bawacima iminyaka eyadlulayo ibhonasi enhle okanye, umzekelo, ukunciphisa izivakalisi okanye ubunikazi obutsha (kwindawo ethile ekude) kwaye uwasebenzise ukuze uthole iindaba kummandla [...]
Indlela i-Palantir yedatha yeziko kunye ne-AI liqikelele ikamva lakho kwiminyaka embalwa ezayo
Kufakwe kuyo UKUFUNEKA KWEMFUNDO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-6 Disemba 2017	• 7 Comments
Ukuqonda indlela yokuphilisa isifo, kufuneka uqonde ingundoqo yengxaki. Ukuqonda indlela yokulwa notshaba, kufuneka umazi kwaye uqonde indlela yokugwema ingozi esondeleyo, kufuneka uqonde ukuba yintoni ingozi. Ngoko ke kufuneka uqale ufumane ulwazi [...]
Umsunguli D-Wave: "I-AI yangempela iya kuba yingqiqo kunabantu kunye neengqondo ezinengqondo"
Kufakwe kuyo UKUFUNEKA KWEMFUNDO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-3 Disemba 2017	• 13 Comments
UGeordie Rose, umsunguli wenkampani eyakha iikhomputha ze-quantum zokuqala, iD-Wave, iqalile inkampani entsha eya kwakha i-'AI yangempela '. Oko kukuhlakanipha kwengqondo, kodwa kwinqanaba elingenakukwazi ukuluhlula kwiinkcukacha zobuntu kwaye lidlula. Kwintetho engezantsi apho azisa khona inkampani achaza [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.484.687